Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Janoary 2020 à 05:06
20 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Janoary 2020 à 04:59 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Janoary 2020 à 05:06 (hanova) (esory)
=== Hevi-teny voalohany ===
Ny hevitra voalohan'ny teny latina hoe ''substantia'' dia "fitoerana ao ambany". Niitatra ny hevitr'io teny io ka nanondro ny raha (matiera) iforonan'ny zavatra iray ka tsy heverina ny fisehony na ny endriny mety miova ety ivelany. Ny teny grika hoe ''οὐσία'' / ''ousίa'' kosa dia avy amin'ny matoanteny grika hoe ''εἶναι / einai'' izay midika hoe "misy", afa-tsy hoe ampiasaina ho [[matoanteny andry]] ilay teny. Ny ''ousίa'' dia milaza ny maha-izy ny zavatra iray. Ny latina dia nandika ny hoe ''ousia'' dia nadika amin'ny teny latina amin'ny hoe ''substantia'' na ''essentia'', izany hoe ilay zavatra na toetra tsy miova sady marin-toerana.
=== Hevi-teny teolojika ===
Ny Fiangonana tandrefana no nampiasa ny teny latina hoe ''substantia''. Ny sobstansan' Andriamanitra dia ny "maha izy azy an' Andriamanitra", ny fototra maha- Andriamanitra an' Andriamanitra, ny tsy itovizanitovian' Andriamanitra amin'ny zavatra noforonina. Ampiasaina ny teny hoe ''substantia'' rehefa hanao fampisampanan-teny ka ahazoana ny hoe ''consubstatialita'' (latina). Mitovy ''substantia,'' hoy ny mpanohana ny Trinite, ireo [[Persona (teolojia)|persona]] telon' Andriamanitra ka izany fitovian'ny ''substantia'' izany no atao hoe ''consubstatialita''. Ny Fiangonana tatsinanana dia nampiasa ny teny grika hoe ''ουσία'' / ''ousia'', izay mitovy hevitra amin'ny teny latina hoe ''substantia''. Ilay atao hoe ''consubstatialita'' amin'ny teny latina dia atao hoe ''ὁμοούσια'' / ''homoousia'' amin'ny teny grika.
Ao amin'ny [[fanekem-pinoana nikeana]] ampiasain'ny [[Protestantisma eto Madagasikara|fiangonana protestanta malagasy]] dia izao no voasoratra: "miray ''Sobstansa'' (izay maha-Izy Azy) amin'ny Ray", fa ao amin'ny fiekem-pinoana niseana ampiasain'ny [[Eglizy Katolika Apostolika Romana (Madagasikara)|fiangonana katolika]] malagasy dia ahitana ny hoe "iray ''fomba'' amin'ny Ray".
== Ny "fampianarana marina" momba ny sobstansa ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/980221"